हेटौंडाकी बुहारी, रहस्यमय मृत्यु : ६ महिनानै पति गुमाएकी चेलीको हत्या कि आत्महत्या ?
असार २३, २०७७ ०९:००:२५
असार ९, २०७७ बागमती खबर
हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ गर्दोई निवासी २२ बर्षिया सुमिना थापा (नाम परिवर्तन)को गत असार २ गते बिहान आफ्नै घरको भान्छा कोठामा शव भेटियो । नजिकै मसला पिन्ने लोहोरो, टाउकोमा चोट र रगत लतपतिएको अवस्थामा उनको मृत शरीर लडिरहेको अवस्थामा थियो ।
उनको मृत्यु रहस्यमय बनेको छ सुरुमा परिवारले आत्महत्या भनेपनि हत्या वा आत्महत्या निक्र्योल हुन सकेको छैन । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले हत्या हुनसक्ने भन्दै सुमिनाको ससुरा र नन्दलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी हिरासत मै राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यो घटना प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले अनुसन्धानमा कुनैपनि असर नपर्ने गरि हामीले त्यहाका स्थानीय र परिवारसंग केहि बुज्ने प्रयास गरेका छौं ।
नाम सुमिना थापा (नाम परिवर्तन) घर कपिलबस्तु बाणगङ्गा बर्ष २२, होटल म्यानेजमेन्ट बिषयमा भारतको दिल्लीमा ब्याचलर पड्दै थिइन् उनि । यता हाल उनका ससुरा प्रकाश थापा पेशाले शिक्षक मकवानपुरकै एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानअध्यापक । उनको एकमात्र छोरो प्रवेश थापा (नाम परिवर्तन ) इन्जिनियर ।
छोरोको बिवाह गर्ने उमेर भएकाले प्रकाश थापाले आफ्ना चिनजानकालाई कुरा चलाउन थाले । परिवार ठोक्कियो सुमिनाको परिवार संग । सबै कुराकानी भयो । फागुन २०७५ मा बिहेको कुरो चल्न थाल्यो । केटो इन्जिनियर, हेटौंडामा बस्ने, सानो परिवार, एक्लो छोरी भनेपछि सुमिनाको परिवार पनि बिहेको लागि राजि भयो । सुमिना दिल्ली मै थिइन् । बिहेको कुरो आएपछि ४ बैशाख २०७६ मा सुमिना र प्रवेशको परिवार भेट भयो र केटा केटि बिहेका लागि राजी भए। १८ बैशाख २०७६ मा उनीहरुको धुमधामले बिहे भयो ।
बैवाहिक जीवन दुबैजनाको निकै राम्रो संग चलिरह्यो । दशैँ आयो बिहे गरेको सालको पहिलो दशैँ अलि महत्वपुर्ण रुपमा हेरिने भएकाले हेटौंडामा घरमा टिका थापेर सुमिना र प्रवेशको जोडी कपिलबस्तु तिर लागे । २२ गते दशैको टिका सकियो । अघिल्लो दिन संगै हेटौंडाबाट हिडेका उनीहरु संगै फर्किन चाहेनन् । भोलिपल्ट २३ गते सुमिना माइत नै बसिन् । प्रवेश श्रीमती छोडी त्यहाबाट हेटौंडाका लागि फर्किए, सुमिनाले आफ्नो प्यारो श्रीमानलाई त्यस दिन बिदा गरिन् ।
तर त्यो बिदाई उनको लागि जिन्दगिमा अन्तिम बिदाइ बन्यो । जुन कसैले कल्पनै गरेको थिएन । २३ गते प्रवेश बर्दघाट भन्ने ठाउँमा साथीहरु संग एकैछिन रमाइलो गरे र त्यहाबाट फर्किदा दाउन्ने भन्ने स्थानमा उनको मोटरसाइकल दुर्घटना भयो । उनको घटना स्थल मै निधन भयो ।
यो खबर सुन्ना साथ प्रवेशको परिवार अचेत बन्यो ।
उता सुमिनाको आफ्नो भर्खरै रंगिएको सिउदो पुछिएको खबरले सुनिना अचेत अवस्थामा पुगिन । बिबाह भएको छ महिना मात्र भएको थियो । ६ महिनामा धेरै सपना बुनेका थिए सुमिना र प्रवेशले । घरमा सामान टन्नै भएकाले बिहेमा सुमिनाको माइतीको बुवा आमाले सामान किनिदिने पैसा उनको खातामा हालिदिएका थिए। त्यहि पैसाले सुमिना र प्रवेशले आफुलाई मनपर्ने सोफासेट र ठुलो पलंग बनाउन दिएका थिए । सोफा घरमा ल्याइसकेका थिए भने पलंग घरमा ल्याउनै बाकि थियो तर उनीहरु त्यो पलंगमा संगै सुत्न पाएनन् ।
बिहे गरेको ६ महिनामै आफ्नो पति गुमाउदाको पिडा कस्ती थियो होला ? हामि सजिलै कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । त्यो बज्रपात सुमिनालाई आइपर्यो । हिन्दु सस्कार काजक्रिया सबै काम बिधिबिधान अनुसार नै सुमिनाले सकिन् । फुटेको जस्तै महसुस हुने मुटु दह्रो बनाउदै उनले एक्लो जिन्दगी सुरुगर्न थालिन् ।
पति गुमाएपछी आफ्नो घर पराइ जस्तै बन्न थाल्यो सुमिनालाई । उनकी आमाका अनुसार उनलाई आफ्नो घरमा राम्रो व्यवहार हुने छोड्यो । नन्दले तेरै कारणले मेरो दाई मरेको भन्दै नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेको, बेलाबेला सुमिनाले आफ्नी आमालाई फोन गरेर सुनाउथिन् । पति वियोगमा परेकी सुमिनालाई घरका परिवारले उनको पतिले गरेको बिमाबाट आउने रकम खोई ? हामीलाई चाहिन्छ भन्ने जस्ता थुप्रै कुराहरु गर्ने गरेको सुमिनाकी आमाले बताउनुहुन्छ ।
बिहेपछि रोकिएको उनको पढाई भारत मै गएर नियमित गर्छु भन्दा ससुरा र नन्दहरुले अवरोध गर्न थालेपछि सुमिना माइत फर्किईन् । आफ्नो आधा अंगनै मरेजस्तै भएको भन्दै घरीघरी आमा संग भक्कानिदै रुन्थीन् सुमिना ।
माइतीले धेरै सम्झाउने बुझाउने गरेपछि घरको सल्लाहमा उनि पुषको अन्तिम साता पुनः भारत गईन् । माईतिले नै खर्चको जोहो गरि उनलाई पढ्नका लागि भारत पठाए । उनले बेलाबेलामा घरमा फोन गरिरहन्थिन तर घरबाट कहिल्यै उनलाई के छ कस्तो छ भनि फोन जादैनथ्यो ।
फागुनको अन्तिम साता उनि पुनः नेपाल आइन, सिधै माइत गईन । चैत ८ गते घर हेटौंडाबाट ससुराले फोन गरे । छोरोको छ महिनाको काम छ, आउनुपर्यो भनि फोन आएपछि उनले आउने मनस्थिति बनाईन तर ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो ।
गाडीको पास बनाएर चैत्र २३ गतेको ज्वाइको कामका लागि कपिलबस्तुबाट छोरी सुमिनालाई २१ गते हेटौंडा ल्याईदिएर सुमिनाको बाबु उतै फर्किए । हेटौंडा आफ्नो घरमा आएकी सुमिनाले परिवारमा कसैको पनि आफ्नोपन भेटाइनन् । नन्दको रुखो व्यवहार त छदैछ जुन कामका लागि उनि आएकी थिइन्, आफ्नो पतिको ६ महिनाको काममा उनलाई केहि गर्न दीइएन । सुमुनाकी आमा भक्कानिदै भन्छिन् "छोरीले फोन गरेर भन्थी, "आमा, ज्वाईको लागि मैले गर्नुपर्ने केहि काम गर्न पाइन् , एउटा फुल पनि मलाई चाडाउन दिनुभएन" ।
काम सकिएपछी सुमिनालाई माइतीले बोलाए । लकडाउनले गर्दा उनलाई माइत जाने अनुमति घरबाट मिलेन । दिन बितिरहेको थियो । छिमिकीहरुका अनुसार निकै हसिली, धेरै नबोल्ने र मेजासिली थिइन् सुमिना । उनलाई यताउता छिमेकीहरुसंग धेरै बोल्न, हिड्न बन्देज थियो । घर छेउछाउका साना बालबालिकाहरु संग खेल्न उनि बढी रुचाउथिन् ।
तर अचानाक असार १ गतेको राति, २ गते बिहान सोच्नै नसक्ने घटना भयो । उनको मृत शरीर भान्छा कोठामा लडिरहेको अवस्थामा भेटियो ।
२ तले घर माथिल्लो तलामा उनीहरुको परिवार । घरमा ससुरा, नन्द र बिरामी सासु । घटना भएपछी उनका ससुराले स्थानीयलाई खबर गरे । मेरी बुहारी छैन,भान्छामा चुक्कुल लगाको छ भनि हल्ला गर्न थालेपछि प्रहरी बोलाइयो । प्रहरीले झ्यालको झाली काटेर भित्र हेर्दा उनको बिभत्श शव भेटियो ।
बिहे गरेकी ६ महिनामै पति गुमाएकी सुमिनाले पनि यो धर्ति छोडेको प्रहारले पुष्टि गर्यो । उनको मृत्यु पश्चात बिभिन्न कुरा उठिरहेका छन् । हत्या कि आत्महत्या ? माइती पक्ष र त्यहाका स्थानीयहरुका अनुसार आत्महत्या भन्दापनि हत्या हो भन्ने शंकामा धेरै मानिस छन् । यद्दपी यस बिषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तर प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सुमिनाको ससुरा र नन्दको संलग्नता रहेको र हत्या नै देखिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले बताएको छ ।
सुमिनाको माइती पक्षले बिमा रकमको कारण उनको हत्या गरिएको भन्ने आरोप लगाएका छन् । टाउको र आँखामा गहिरो चोट, ढोकाको चुक्कुल भित्र बाट लगाइएको, एउटा झाली भएको झ्याल खुल्लै तर झाली काटेर भित्र पस्नुपर्ने अवस्थालगायतको कुराले घटना शंकास्पद र रहस्यमय छ ।
छिमेकी एक बालिकाले राति सौचालय जानेबेलामा त्यहा बचाउ बचाउ भन्ने आवाज आएको र चिच्याइरहेको सुनेकाले डराएर सौचालय नै नगई आफु फर्केको सुनाउछिन् ।
यसको थप अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको जनाएको छ । केहिदिनमा हत्या हो या आत्महत्या प्रहरीले खुलाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
छिमेकी र माइती पक्षले लगाएको आरोप जस्तै उनलाई बिमा रकम वा अन्य कुनै पैसा,सम्पतिकै कारण त्यति बिघ्न माया गर्ने ससुरा निर्मम बनेका हुन् त ? या अरुकसैले हत्या गरेको हो ? या आफैले देह त्याग गरेकी हुन् ? प्रस्न धेरै जन्मिएका छन् ।
प्रहरीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेकोले केहि समयमै हत्या वा आत्महत्या पत्ता लाग्ने छ । तर घटनाको निस्पक्ष अनुसन्धान र छानविन हुनुपर्ने सबैको माग छ ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, असार ९, २०७७, ०७:०६:००